हिंसाको विषयमा कलाकारहरु रेखा र स्वस्तिमा के भन्छन् ? ( भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
21448579 765180 6458958 14224441
हिंसाको विषयमा कलाकारहरु रेखा र स्वस्तिमा के भन्छन् ? ( भिडियोसहित)
२९ पुष २०७६, मंगलवार ११:४२
सञ्चारकर्मी डिबी खड्काको पुस्तक नियत सोमबार विमोचन भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुस्तक विमोचन भएको हो । प्रज्ञा भवनमा भएको कार्यक्रममा अभिनेत्रीहरू रेखा थापा, स्वस्तिमा खड्का र लक्ष्मी बर्देवाले ‘नियत’ विमोचन गरेका थिए । पुस्तकमा कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा/संघर्ष गरिरहँदा कलाकारले भोगेका कथा र उनीहरूमाथि त्यही क्षेत्रका मानिसहरूले राखेको गलत नियतका विषयका कथाहरु समेटिएका छन् ।
पुस्तक विमोचन समारोहमा सहभागि अभिनेत्री रेखा थापाले महिला मात्रै नभएर पछिल्ला समय पुरुष पनि हिंसाको शिकार भएको बताइन् । अहिले एकतातिर बलात्कार र महिला हिसा बन्द गरौ भन्ने अर्को तिर उनीहरुको दृष्टिकोण सधै नकारात्मक हुने उनको भनाई थियो ।
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले आफूले सुरुवाती चरणमा केही नराम्रा सन्देशहरु सामाजिक सञ्जालमा पाउने गरेपनि पुस्तकमा उल्लेख भए जस्तो हिंसाको शिकार आफु नभएको बताइन् । उनले संघर्षको समयमा भिडियो खेलाए बापत तिमीले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशहरु आउने गरेपछि आफूले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सञ्जालबाट नै ब्लक गरिदिने गरेको सुनाइन् ।
पुस्तकका लेखक डिबी खड्काले नेपाली रंग क्षेत्रमा देखिएका कुराहरु नै पुस्तकमा समेटिएको बताए । खड्का रंग पत्रकारिता क्षेत्रमा करिब एक दशकदेखि सक्रिय छन् । हेरौं यो भिडियोमा :
रेखा र स्वस्तिमा, विषयमा कलाकार, हिंसा
Prevद कर्माकी नायिका परमिता मिडियामा ( भिडियोसहित)
चन्द्रप्रकाश बानियाँको ‘महारानी’ सार्वजनिकNext
लकडाउन अवधिमा ७३० महिला तथा बालिकामाथि हिँसा, १०९ बलात्कारका घटना
दिल्ली हि‌ंसा: मर्नेकाे संख्या ३५ पुग्यो
दिल्ली हिंसाका कारण सिबिएसई बोर्डको परीक्षा स्थगित